कोरोनाको कुन खोप विश्वबजारमा कहिले आईपुग्छ ?
संसारभर सबैको एउटै साझा चिन्ता छ, कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विकास कहिले होला ? यो आमनागरिकको पहुँचमा कहिले पुग्ला ? यसको उत्तर सहज छैन। तर, धेरैको अनुमान छ कि परीक्षणका क्रममा रहेका केही खोपले नोभेम्बर अन्तिमसम्ममा सफलता पाउनेछन्। अर्को वर्ष मध्यसम्म आमनागरिकको पहुँचमा खोप पुग्नेछ।
जोनसन एन्ड जोनसन
फाइजर तथा बायोएनटेक
औषधि निर्माता कम्पनी फाइजर तथा बायोएनटेकले बनाएको कोरोना विरूद्धको खोप ९० प्रतिशत मानिसमा संक्रमण रोक्न प्रभावकारी भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। खोपको सफलतालाई कोरोनाको जारी विश्व महामारीका विरूद्ध अहिलेसम्मको ठूलो सफलता ठानिएको छ। अनुमति मिलेमा कम्पनीले वर्षको अन्त्यसम्म ५ करोड मात्रा उत्पादन गर्न सकिने बताएको छ। यो मात्राले २ करोड ५० लाख मानिसलाई कोरोनाबाट जोगाउन सक्नेछ। यस्तै आगामी वर्षसम्म १ अर्ब ६० करोड मात्रा उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ।
खोपको हालसम्म ६ देशका ४३ हजार ५ सय मानिसमा परीक्षण गरिसकिएको छ र यसमा कुनै जोखिमहरू देखिएको छैन्। हाल संसारमा दर्जनौको संख्यामा खोपहरू आफ्नो परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। तर नतिजा देखाएको खोप यो मात्रै हो। शरिरको प्रतिरोधक क्षमता भाइरसविरूद्ध लड्न तयार होस् भन्नाका लागि यो खोपबाट मानिसको शरिरमा भाइरसको जेनेटिक कोड हालिन्छ। यो खोप तीन साताको अन्तरालमा दुईपटक लगाइन्छ। हालसम्म अमेरिका, ब्राजिल, जर्मनी, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीमा भएको परीक्षणले खोप लगाइएको सात दिनभित्र ९० प्रतिशत मानिसमा भाइरसविरूद्ध रक्षात्मक प्रणाली विकास भएको देखाएको छ। यसअघि भएका परीक्षणमा कोरोनासँग लड्न खोपले एन्टिबडी बनाउने र प्रतिरोधी क्षमताले शरिरको एक भागमा टि-सेलको निर्माण गर्दछ। खोपलाई शुन्य देखि ८० डिग्री सेल्सियसभन्दा तलको तापक्रममा राख्नुपर्छ। कम्पनीले उक्त सफलतालाई विज्ञान र मानवताका लागि महान् दिन भनेको छ। आपतकालिन प्रयोग अनुमतिका लागि कम्पनीले यसै महिनाको अन्त्यसम्म आवेदन दिने जनाइएको छ।
अमेरिकन बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्ना इंकले पनि खोप विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलतानजिक रहेको घोषणा गरेको छ। उसले तेस्रो चरणको परीक्षणअन्तर्गत ३० हजार व्यक्तिमा खोप परीक्षण गर्दै छ। जसमध्ये २५ हजार ६ सय ५४ जनाले दोस्रो खोप लिएका छन्। मोडर्ना र फाइजर र बायोएनटेकले यही महिना अन्तिमसम्म सर्वसाधारणमा खोप प्रयोगका लागि आवश्यक अनुमति आपत्कालीन रूपमा प्राप्त गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यी दुवैले अर्को वर्ष मध्यसम्म आमनागरिकको उपभोग गर्ने गरी खोपको विकास गरिसक्ने घोषणा गरेका छन्।